Nepali Sermon Series | Seeking True Faith: एक मात्र साँचो परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आजको संसारमा, धेरैजसो मानिसहरूले केही न केहीमा विश्‍वास गर्ने गर्छन्; धेरैजसो मानिसहरूले एक जना ईश्‍वर हुनुहुन्छ भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्, र तिनीहरू सबैले आफ्‍नो हृदयमा निश्‍चित ईश्‍वरलाई विश्‍वास गर्छन्। परिणाम स्वरूप, संसारका सबै राष्ट्रका मानिसहरूले विभिन्‍न किसिमका सयौं वा हजारौं ईश्‍वरहरूमा विश्‍वास गरेका छन्। धेरै वटा ईश्‍वर हुन सक्छन्? अवश्य हुन सक्दैन। साँचो परमेश्‍वर एउटै मात्र हुनुहुन्छ। त्यसकारण स्वर्ग र पृथ्वी अनि यावत् थोक सृष्टि गर्नुहुने, र सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने एक मात्र परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ? साँचो विश्‍वासको खोजीको यो भागमा, हामी एक मात्र साँचो परमेश्‍वरलाई पहिचान गर्नको लागि यस विषयमा सँगै अन्वेषण गर्नेछौं।